5 Imigibe Social Media — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
ngeposi yeeNdwendwe ukusuka Jessica Barefield
Makhe siqale ngokunikela isikhanyeli. Eli nqaku ayikho ngendlela embi eendaba mpatheko. Isetyenziswa ngokulinganiselweyo, ngentliziyo ekunene yokuma, kunokuba yinto entle. Ingongoma kweli nqaku ukubonisa ezinye iindlela eendaba zentlalo inokuba yingxaki ubomi lamaKristu ukukhuthaza wena ukuba intliziyo yakho xa kuziwa kwakho eendaba kwezentlalo inxaxheba. Ezi iindlela ezintlanu eendaba zentlalo kwimitsitso iminqweno yethu yesono.
1. amajelo Social ingamosha ixesha lakho
Le nto bangevanga ngaphambi kokuba, kodwa kuluncedo eliphindaphindayo. Sikhunjuzwa kwi Efese 5:16-17 ukuba le mihla ayindawo yaye simele senze ukusetyenziswa kakuhle kwexesha elinikiweyo kuthi. Cinga umzuzwana ungaba ukwenza ntoni endaweni ekutshekisheni yonke loo ndawo. Ngoxa lilinde kwi idinga, sikwazi ukugcina uluhlu abantu ukuba bathandazele kwifowuni zethu kwaye achithe loo mizuzu extra ngomthandazo intsapho nabahlobo bethu. ngokuqinisekileyo, ngexesha elinye okanye elinye, sonke unetyala ukuchitha iiyure on Facebook ngemini kwaye ungaze ukuvula iLizwi likaThixo. Ekubeni ngamaphanyazo onke sisipho esivela kuYehova, kuluncedo ukubuza wena, "Ngaba ikho into ebalulekileyo ukuba mna kube ukuchitha ixesha lam phezu?" Ngamaxesha amaninzi, impendulo mhlawumbi nguewe.
2. amajelo Social unika iqonga kwengcinga yakho yonke
Ndicinga kwalemeko ngeposi kwi eendaba loluntu kuqhatha ukuba ucinge ukuba KULUNGILE ukuba uyithumela nje nangantoni. si kha, thina bengaziwa ukunqgubanisa abantu, thina ezingabahloniphiyo abantu igunya, kwaye sithi nantoni sicinga abadumileyo, ngokungathi abantu bokwenene. Kwaye sikholelwa ekubeni na ngokwenene ukuba baphendule nayiphi na kuyo. Musa ukuqhathwa iimfihlo egumbini lakho ngoku-kuya kubakho nto labucala xa simi phambi koThixo ophilileyo kwaye unike inkcaza amazwi ethu. Mateyu isilumkisa intle ngokungafihilisiyo, "Ngomhla womgwebo, abantu baya kuphendula yonke ilizwi engaqondanga ukuthetha. "Makhe kukhunjuzwa le elumkisa Siphinda uhlaziye ubume yethu.
3. media Social kunga- discontentment
Xa sichitha ixesha elongeziweyo wathulula phezu koko abanye bakwenzayo esithi, basondelelane ingqalelo yethu zonke izinto musa sibe okanye uphoswa. Kunokusenza ukuthandabuza kutheni ubomi bethu musa zikhangeleka ngokufanayo. Kutheni na ndicinga ukuba quote? Akwaba bendinale ingqiqo yakhe isimbo. indlu yabo entsha lukhudlwana indlela kuneyethu! Ukuba asilumkanga, imizuzu engamashumi kwiFacebook okanye © kungakushiya uziva emqokozweni, Andimthandi, kwaye underwhelmed nobomi bakho. Hebhere usibongoza, "Gcina ubomi bakho kungekho uthando imali, kuba yiloo nto unayo, ngokuba yena wathi, 'Andiyi kuze ndikushiye, akayi kukushiya.' "Sinako ekugqibeleni nokwaneliseka ebomini bethu amakholwa ngenxa yokuba Imnike zonke izinto ekufuneka thina. Zibuze ukuba izinto ze loluntu ekunceda uyakholwa le nyaniso.
4. media Social kunga- ikratshi kwaye akugcine ngaphakathi ligxile
amajelo Social anokukhawuleza eqongeni zethu self-promotion. Kufuneka sizibuze ukuba yintoni ngokwenene inkuthazo yethu, obhale izinto esizenzayo. Ngaba ufuna uvelwano okanye indumiso? Ingaba sifuna ukuba kakuhle ndicinge okanye ukuqhayisa sigqiba sisenza izinto fun? Ngaba usoloko ujonge ukuba zingaphi 'uthanda "okanye" favorites "iposi yakho wavuka? Zonke ezi zinto ziphembelela ikratshi kwaye sihlale ingqalelo kwiziqu. Oku kuyingozi kakhulu nzima ukuze nabani na iqonga engazukuphelela ngaphaya izihlobo zabo kunye neentsapho. Enoba wenza umculo okanye abe blog ethandwayo, ngenxa nje amawaka abantu ukuphulaphula akuthethi yonke loo nto engqondweni paha. Kufuneka sikhumbule ukuba favorites, izimvo, kunye azithandayo musa ngokuzenzekelayo ukunika ulwamkeleko koko ngeposi. UThixo ubona kukhuthazwa iintliziyo zethu yaye akazange ukuqhathwa isithuba eyakhiwe. Njengoko uSamuweli 2:3 elumnkisa, "Musa ukuthetha loo nto ngebhongo okanye ke umlomo wakho uthethe ikratshi enjalo, ngokuba uYehova nguThixo owaziyo kwaye ngezenzo Yena eziyincamisa. "
5. media Social na umbono wethu kobudlelwane
Kuba wonke kuxhamla amajelo zentlalo analo ubudlelwane, kukho drawback. Kulula ukugcina nabo nawe umthande (mhlawumbi kulula kakhulu?). Ngaba usenayo enzulu, incoko enentsingiselo umntu? Kulula ukugcina up a lot of ngabantu obathandayo-yaye abantu abaninzi nina nokumazi (mhlawumbi baninzi kakhulu?). Ngaba oversaturated kunye neenkcukacha 300 ubomi babantu, ukuba akuyi esenza umsebenzi olungileyo umthande 10 abantu ubona ngokweveki neveki? Sinako ngokukhawuleza sizifundise ukuba abathengi ulwazi endaweni abathandi abantu. Ukwazi ngobomi bomntu nokwabelana yonke into eqhubekayo ebomini bakho ngokusebenzisa amajelo zentlalo akufani njengokuba umhlobo wokwenene. Kunjalo uYesu umzekelo ogqibeleleyo ukuba kuthetha ntoni ukuba umhlobo wenene. Njengoko uYesu ufundisa, "Umyalelo wam lo: Wokuba nithandane, njengoko ndanithandayo nina. Akukho namnye unalo uthando olungaphezu kolu uye, ukuba ndibuncama ubomi bakhe abuncamele izihlobo zakhe. "Ubuhlobo ngaphezu udibaniso updates iwonga kunye nemifanekiso. Ubuhlobo lidini. Loo nto zithwele imithwalo omnye nomnye. Yinto nje yenyani-kufuneka kubambekayo.
Jessica Barefield uhlala Washington D.C. kunye Uhambo yakhe indoda, nonyana wabo Q. Ungafunda ngakumbi kuye blog yakhe, Ungathanda Ukuthanda.
Xavier • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 12:18 pm • impendulo
Oku kuyinyaniso kakhulu. Ndiya ukuvuma ngokuphandle ukuba bachithe iiyure kunye neeyure ixesha lam kunye neentsuku kumajelo kwezentlalo zonke iingongoma beza phambili, I liyayiqonda ngqo. Ndiyazi engqondweni nasentliziyweni yam ndifuna kwaye kufuneka uwugawule ngaphandle, okanye kunciphise kakhulu, kodwa akukho lula. Kodwa umyalezo ukuveza kwaye amazwi kaThixo ukuba usebenzisa ukugxininisa oku kuthetha kum ngokucacileyo. Ndiyabulela ngokuba eli nqaku :)
ashley • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 12:19 pm • impendulo
post Great! wenza ngokwenene ukucinga cinga ukusetyenziswa yam social media!
Tyron • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 12:21 pm • impendulo
ukufunda kakhulu! Ngaba zange inxaxheba social networks de kancinane ngaphezu konyaka kwaye ezi zezinye zezizathu zokuba. Mna okunene ubucinga kokucima uthungelwano zam zentlalo ingqalelo into ekufuneka igxile. Ezininzi ezintle apha. Siyabulela kuba uye wazipha ixesha lakho lokuba ubhale kuyo kwaye wabelane.
daniela • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 12:27 pm • impendulo
Wowu! Yinyani leyo. I ngokuqinisekileyo kufuneka ukuba basebenze kuyo kwimidiya yam ngenzuzo loluntu. Loo nto idla kakhulu omnye kanye yezizathu ndayeka ukuya kwi Pinterest. Enkosi ngokwabelana.
jay • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 12:51 pm • impendulo
Ayikho into emfutshane ayisikeleleyo
Stacey • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 12:57 pm • impendulo
Enkosi kakhulu, obhale le. Bendisoloko ukulwa ndingonwabanga malunga nokufumana on Facebook. Kubonakala mva konke akwenzayo yenzela mad unomsindo. Oku yonke Ndandifuna ukuva kwaye phinda xa kufuneka sikhunjuzwe. Enkosi wena Uhambo. Inkosi ikusikelele.
uMishayeli • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 1:20 pm • impendulo
Eulaivi Clutario • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 1:30 pm • impendulo
Wena i iphefumlelwe! Ngoko iingongoma ezininzi ezilungileyo apha. Makabongwe uThixo ubulumko bakho ukuba eqondakalayo afanelekileyo kakhulu kwisizukulwana sethu! :)
kasewe • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 1:48 pm • impendulo
Ndiye bahlabeka entliziyweni yile ukwabelana enamandla. Ndikholwa sonke wafumaneka enetyala kule ndawo. Siyabonga Uhambo and Jessica. Ngamana uThixo uqhubeka ukusebenzisa kwakho .
kaKalebhi • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 2:15 pm • impendulo
Itshiwo kakuhle! Ndakhe ukuba ezinye zezi ngcinga efanayo media kule minyaka imali edlulileyo. Gcina ukubhala!
indlela • EyoMsintsi 24, 2013 ngexesha 4:56 pm • impendulo
ndiyakuthanda Oku!!!! Ngoko Liyinene kwaye ndinqwenela abantu baqonda ezi ngongoma!
uThemba • EyoMsintsi 25, 2013 ngexesha 5:49 mna • impendulo
Uqinisekile ukuba waphefumlelwa ukuba esi sizukulwana. Itshiwo kakuhle!!!
uClara • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 4:27 mna • impendulo
Enkosi kakhulu Jessica ukuba la mazwi ayinyaniso kangaka kunye nokuqiniseka banikwa. Ngamana uThixo uqhubeka ukusebenzisa wena nendlu yakho :-)
Angela • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 5:27 pm • impendulo
Ndiyabulela kuwe ngenxa yale post khanyisa! Oku kufuneka zenze ukuba ukulungisa amehlo ethu uYesu, ngaphantsi kwabanye kunye.
james • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 5:27 pm • impendulo
Kuhle…. Uzuko kuThixo yedwa….
uphawu • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 5:36 pm • impendulo
Enkosi kakhulu, ukwenzela i “abantu kancane” ngelizwi nayo uthetha amanani ukucinga zethu “social” ixabiso livela kwimidiya. Enkosi wake up call !
Jimmy McCrary • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 5:38 pm • impendulo
Ebendiyifuna ngayo le!!
Oyishoma Emmanuel • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 5:40 pm • impendulo
Kunjalo ke. Thina ukuchitha ixesha elixabisekileyo kwi social networks ngaphandle kwenjongo, yaye xa injongo engekho phantsi, ukuhlukunyezwa ayisoze. Mna ngokwam i ngenene ndinetyala yale ngamanye amaxesha; kodwa i Sithandazela ukuba ubabalo ukuba batshintshe izinto zam.
Adin Moore • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 5:44 pm • impendulo
Esi sisithuba elihle kakhulu. Siyabonga ngokwabelana kunye nathi, wayekuthanda ukuyifunda kwaye lokuvula amehlo am, ukuba imigibe media. :) ufefe & Peace.
Joseph • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 6:03 pm • impendulo
Kanye isizathu sokuba unaphakade Fakebook lam ekuqaleni 2012. Nje ungathanda indlela wancama cable TV ngo 2001, I ungaphoswa nokuba Fakebook okanye TV. FB yenza kube lula ukuba ukuthanda wena, okuyinkonzo yezithixo kona oko. Ukuba kwi computer emsebenzini (lokuhlela ividiyo) yonke loo nto andifuni ukuchitha ixesha phezu kwayo ngexesha yam free, kodwa kulula kakhulu ukuchitha ixesha kwi computer. Ukuba ndiza ku YouTube, ukuba ukubukela iividiyo lakheke kwezinye amaKristu. I sincoma kakhulu onke amaKristu ukuba ukufunda eli nqaku: “Ndiyila Imiphefumlo yethu Facebook” yi Shane Hipps (Second Nature Journal dot com)
Leticia • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 6:25 pm • impendulo
wacinga kakhulu ingqondo!
awenziwanga • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 6:41 pm • impendulo
Wowu, post enkulu, Ndisikelelwe ngokwenene.
Barbara • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 6:56 pm • impendulo
OMG Mna ke enamacala lokugqibela kanye le nto niyithethileyo …iiyure imali on facebook ekufuneka ukuchitha igama! Ndiyawuthanda lo blog…ukugcina ulwazi ozayo!
noPrisila • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 6:58 pm • impendulo
Ndiyayithanda isikhundla sakho elungeleleneyo; wayengayigwebi ngokupheleleyo kwimidiya, kodwa bebonisa phandle imiba / ukuthambekela ukuba akamkholisi. Kundikhumbuza iLove.
Hriosell • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 7:05 pm • impendulo
points..thanks Good ukwabelana bendiyifuna .
Christine • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 8:16 pm • impendulo
Enkosi ngokwabelana! izikhumbuzo Zintle ngendlela esifanele amlumnkise yona xa kuziwa kwimidiya.
Susan • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 8:29 pm • impendulo
Ndiyabulela Jessica ngeli nqaku & ndiyabulela UHAMBO obhale on fb ukuze ndikwazi ndiyibone & beze blog ukuba uyifunde.
Liz • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 8:41 pm • impendulo
Great bhala up! Iingcinga uqinisekise…inothi self!
UChrista • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 8:56 pm • impendulo
Wowu! Oku elimangalisayo! Yonke indawo Wandibetha ndim ukuze siwuve. Enkosi kakhulu. inkosi ikusikelele!
pink • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 9:23 pm • impendulo
Enkosi kakhulu lokubhala le. Kunjalo banokuqonda kakhulu kwaye iye yandinceda gqitha ekuqondeni ukuba kufuneka anciphise ixesha lam namajelo eendaba lwentlalo. Uninzi izinto ezichazwe Ewe zonke izinto liyayiqonda. Ukuchitha ixesha elininzi kumajelo loluntu Akuyongenelo umoya wam blog wakho ubeke ngokwenene amazwi kum. Kwakhona ngiyabonga kakhulu
Laurie • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 10:41 pm • impendulo
Indawo nenombolo 4 ukwenzela mna. Enye ukubukela – enkosi
Terrell • EyoMsintsi 26, 2013 ngexesha 11:09 pm • impendulo
Enkosi lokubhala eli nqaku; eli nqaku uyakha.
Clement Magombo • EyoMsintsi 27, 2013 ngexesha 2:25 mna • impendulo
UThixo anisikelele ngokwabelana le. Ukuba ndimele ndibe nyulu olucingisiswe kuyo yonke into endiyenzayo online / ngaphandle kweintanethi. Makube lubabalo, noxolo
FROM • EyoMsintsi 27, 2013 ngexesha 3:31 mna • impendulo
awesome isihloko! Kakuhle esithi kwiza-. enkoso ngokwabelana
Elton • EyoMsintsi 27, 2013 ngexesha 6:18 mna • impendulo
Banetyala njengoko kuhlawuliswa kuzo zonke 5 iingongoma…Ndiyabulela kuwe ngenxa yoku.
Adam • EyoMsintsi 27, 2013 ngexesha 7:35 mna • impendulo
Eli nqaku wabanjwa iliso lam ngokukhawuleza kuba umsebenzi yam intanethi yaye inxalenye enkulu lwalo kwimidiya. Phambi lo msebenzi wam Ndiyayiqonda ngokupheleleyo kule. Ngokwenene inokuba yokuchitha ukuba akukho ukuzeyisa. Kufuneka ube yinto ngokuqaphela ukuze uqinisekise!
gaxa • EyoMsintsi 27, 2013 ngexesha 9:32 mna • impendulo
Ndibone eli khonkco on Facebook wam yaye sisuke ukufunda ngenxa yokuba ndandikwazi bekuya ondohlwayayo kwaye namhlanje ndathi, “Kulungile… Makhe unayo kuyo.” hleka kakhulu. Nje ngayo yonke into apha liyinyaniso malunga nendlela ixesha lam ndilichitha intanethi yaye ndiza ukucinga ukuba umntu owabhala eli nqaku ibingayi uthumele le ukuba wayengazange kunzima nale ngokwakhe ngandlel 'ithile. Ngoko nice ukwazi ukuba kukho abanye abantu bathwale okanye ukuthwala umthwalo efanayo. Ecaweni unengxaki uzive ngathi ukuba avume ukusebenzisa efana nale, ngenxa yokuba siye wadala ingcamango yokuba akukho mntu wumbi usaziva nayo. Nje enye imini ndandithetha nomyeni wam ndamxelela indlela osule apps kwi ipod wam (ewe sisenalo ipod hayi i iphone, bazikhethele) ngenxa yokuba wadala yokucinga engekho mpilweni / abangahloneli Thixo. I sebenzisa ukudlala Ekhaya Design apho ukudala iphupha lakho ekhaya kunye nabo Bendiya wadandatheka kangangokuba nendlu siphila. Ndisakuthanda udlala Mall yeHlabathi on FB, wavuma nomyeni wam ukuba ndiyayithanda kuba avatar yam umntu Andinguye, yena pretty, ezinqinileyo, independant kwaye leengcinga ezimangalisayo neyam esiphila phakathi. Mhlawumbi ndivakala ingumnqa okanye abantu bacinga ukuba kwabelwane kakhulu kodwa oku inkolelo yam. Enkosi ekubetheleleni into ndiyazi ngokwabelana ngokwakho kunye nathi umbhali kunye nezinye amazwana.
ChinaJohnson • EyoMsintsi 27, 2013 ngexesha 11:44 mna • impendulo
Ndiya ukucima Facebook wam Instagram okwethutyana. Oku wake up call yam. abayeni wam uye endixelela ngale kwaye discontentment uye kude kakhulu! Siyabonga Jessica!
Aaron • EyoMsintsi 27, 2013 ngexesha 1:04 pm • impendulo
lol oku kuyinyaniso kangaka.. Ngethamsanqa, i akhona akhawunti yam social networking malunga 3 Kwiminyaka eyadlulayo :D
Richard • EyoMsintsi 27, 2013 ngexesha 1:46 pm • impendulo
UYoshuwa • EyoMsintsi 27, 2013 ngexesha 9:59 pm • impendulo
Ukuba ngenene oku! Got me thinkin!
RJ • EyoMsintsi 30, 2013 ngexesha 6:21 mna • impendulo
Enkosi! Ndizo uthathe iveki ikhefu olude ukusuka Facebook, email, kunye Instagram kunye nomsebenzi ezo ubudlelwane mna nabantu ndiyabona ebomini bam ngemihla.
friends • EyoMsintsi 30, 2013 ngexesha 7:21 mna • impendulo
izinto fantastic! Ndingu umfundi kwisikolo samabanga aphakamileyo yaye inxalenye malunga ukubeka istokhwe kangaka ibe retweets kwaye uyathanda Kuliqiniso! I ngokuqinisekileyo Ndicinga ukuba ezithile izinto ezintle ezinokuthi uphume Twitter / Facebook kodwa konke malunga apho kwakho intliziyo!
THOMASSINGWA • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 12:51 mna • impendulo
Wow Ndiyabulela kuThixo, ukuba ibhalelwe mina,wanga umphi ubomi buya kuhlala kukusikelela wena family.Trip yakho bekusoloko umntu kweentsuku lomculo,writtens etc undigcina awake.we ndimbulela uThixo ngenxa yenu
Sunshine • EyeDwarha 3, 2013 ngexesha 11:17 pm • impendulo
Facebook free koLwesihlanu?! Dibana nam! :P inyanga yonke ka-Oktobha!
Khankanya: Kuba lusifingile nje uthando Lupe
Miranda • EyeDwarha 8, 2013 ngexesha 1:38 mna • impendulo
post kamnandi! media Social inokuba kancinci kakhulu kodwa xa ndibona imiphefumlo ukufikelela yaye ityalwe ibe ecaweni kunye neentsapho zabo baza bakhonza ecaweni kunye noluntu lwabo kunye neentsapho.. Oko iyamangalisa kum.
Keinya • EyeDwarha 18, 2013 ngexesha 5:11 mna • impendulo
Wowu. Oku wathetha ngokwenene kum Ndiyayibulela. Kuba njalo ezicace kakuhle kwaye ingcebiso enkulu ngeendlela ukubonakalisa. Enkosi!
Marjorie • EyeDwarha 21, 2013 ngexesha 7:15 pm • impendulo
Ndiyabulela obhale le! Ndivuya gqitha uThixo wabakhokelela ukuba blog yakho namhlanje ngenxa yokuba ngokuqinisekileyo kwakufuneka bayifunde le!
Jerdon • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 2:03 pm • impendulo
Ndiyakuthanda ukuza kulo blog nokufunda zonke ezi zithuba eyoyikekayo Trip kunye nenkosikazi yakhe. Gcina up umsebenzi olungileyo nina nobabini!!! inkosi ikusikelele.
pelumi • EyeNkanga 3, 2013 ngexesha 9:47 pm • impendulo
lo wanika nje othe ngakumbi ukuba Ndiye ndacinga ukuba
Uhambo kunye nentsapho yakhe iintsikelelo ehlambulukileyo.
TheMesenger • EyeNkanga 8, 2013 ngexesha 8:54 mna • impendulo
Oko kwenzeka ngamanye amaxesha akunjalo ????
TheMesenger • EyeNkanga 8, 2013 ngexesha 8:51 mna • impendulo
Leyo sooooo kuyinyaniso oko kuthatha ixesha kude uthixo kwakhona akuyi kuya kubonakala ukuba ixesha 4 naye siza lunqamle lona benze ixesha
kat • EyeNkanga 17, 2013 ngexesha 12:05 mna • impendulo
ukufunda awesome. Kuyavunywa, i uchitha ixesha elininzi ujonge amakhwenkwe ezintle izinto ezintle isekubeni zonke ezi zinto ezibalulekileyo on tumblr ukuba i badla sikugatye uThixo. ukuba buhlungu, into ebuhlungu; i kungenzeka ngokufunda up on ilizwi lakhe kwaye bachitha ixesha elininzi kunye naye….enkosi qwenge iliso!
Charity • EtiMnga 28, 2013 ngexesha 5:57 pm • impendulo
Wowu. Ndandicinga ukuba wenza okulungileyo kuba uthungelwano nje ezimbini. Oku nakanjani kwandinceda khangela ngokwam. Ndandicinga kuba ngokona I ilungile, kwaye ke kusoloko kukho igumbi lokunyusela.
uzifihla • EyoMqungu 30, 2014 ngexesha 10:29 mna • impendulo
UThixo anisikelele ngokwabelana oku ndiyabulela! Esi sithuba nje mna ndicinga ngexesha I amanxuwa kunye namajelo eendaba zentlalo nemixokelelwano yayo. Iye yandinceda ukuba ukuphinda-ukucinga izinto endizenzayo kwexesha.
Mercy • EyoMdumba 17, 2014 ngexesha 3:56 pm • impendulo
Ndivumelana ndawo zonke. Ngokuba ukuba sele uphambuke ezintethweni Instagram kuba mna ndazibona sithelekise wam, amanye amantombazana apho. Akukho nto ilungileyo ukuze azive nambulelo. Ndiyakuthanda ujonge izilwanyana cute. Hleka kakhulu
Ndazicingela Isusa fb wam, Instagram akhawunti amaxesha amaninzi. Mna ndicinga ukuba kuhle ukuba ukugcina kunye namalungu osapho kude ahluke. :)
ekhaya lokubhalela • EyoKwindla 5, 2017 ngexesha 3:30 mna • impendulo
blog Excellent! Ingaba unayo nayiphi na iingcebiso kunye namacebo abanomnqweno ababhali?
Ndiza uceba ukuqala website yam kungekudala kodwa mna elahlekileyo kancinane kwi yonke.
Ngaba ukuphakamisa ukuqala iqonga okhululekileyo njengathi WordPress okanye yiya khona ukhetho ehlawulwa? Kukho iinketho ezininzi phaya Mna ngokupheleleyo amandla ngenxa ..
naziphi na izimvo? Enkosi!